यस लेखमा हामी स्प्रिेडसिट सिर्जना प्रक्रिया देखो हुनेछ। यो भन्दा सामान्य सम्पादक - एमएस कार्यालय एक्सेल। प्रश्न कार्यक्रम एक कार्यालय आवेदन छ, र स्थापना यसलाई कार्यालय कार्यक्रम को सम्पूर्ण माईक्रोसफ्ट अफिस सुइट संग स्वचालित रूपमा गरिन्छ।
एक्सेल मा, मुख्य रूप जटिल गणना, चार्ट र रेखांकन को तयारी, साथै सिर्जना टेबल लागि प्रयोग। कसरी एक्सेल मा तालिका सिर्जना गर्न? यो प्रश्नको जवाफ आफ्नो पीसी मा स्थापित कार्यालय कार्यक्रम को संस्करण निर्धारण गर्न सुरु गर्न धेरै गाह्रो छ। को 2003 संस्करण सङ्केत गर्दै।
, सुरु गर्न कार्यक्रम खोल्न:
• "सुरुवात" बटन
• मेनु वस्तु "सबै कार्यक्रम"
• धारा "Microsoft Office"
• सेक्सन "Microsoft Office Excel 2003"
पूर्वनिर्धारित गरेर, सम्पादक को पहिलो पृष्ठ प्रयोग उपकरण आधारभूत प्यानल मात्र दुई हुनेछ, "मानक" र "ढाँचा"। तालिका को प्रत्यक्ष सिर्जना संग, तपाईंलाई आवश्यक एक उपकरणपट्टी "ढाँचा" नाम। तसर्थ, सम्पादक खुला छ, तर कसरी एक्सेल मा तालिका सिर्जना गर्न?
प्रत्येक सेल प्लेट (सेल) यसको आफ्नै व्यक्तिगत ठेगाना पङ्क्ति नम्बर र स्तम्भ नाम को निर्वाचकगण छ। हामी को पङ्क्ति र उत्पादन तालिकाको स्तम्भहरू संख्या निर्धारण र कक्षहरूको इच्छित संख्या चयन गर्नुहोस्। इच्छित खण्ड अलग गर्न, तालिकाको माथिल्लो बायाँ कुनामा स्थित गरिनेछ जो सेल, मा कर्सर राख्नुहोस्, र बायाँ माउस बटन पकड गर्न दायाँ सेल को तल कर्सर ल्याउन आवश्यक छ। उचित कार्य संग, तपाईँले कालो फ्रेम मा नीलो पारदर्शी उत्पादन तालिकाको पृष्ठभूमि देख्नुहुनेछ।
थप प्रक्रिया "ढाँचा" बटन "सीमाहरू" नाम उपकरणपट्टीमा फेला र भविष्यमा तालिका सीमानाहरू चयन गर्न छ। एक्सेल मा तालिका सही आकार कसरी बनाउने? त्यसो गर्न, स्तम्भहरू र पङ्क्तिहरू को चौडाई निर्धारण। सबै भन्दा सरल - यो केवल "आँखा गरेर" पङ्क्ति र स्तम्भहरू धक्का छ त चौडाई तथा उचाइ को चयन द्वारा बोल्न। जब दुई तेर्सो तीर एउटा ठाडो रेखा रूपमा (टोपी प्लेट मा) प्रतिमा आसन्न स्तम्भहरू वा पङ्क्तिहरू बीच सीमा मा माउस कर्सर देखिन्छ। स्तम्भहरू वा पङ्क्तिहरू पुस मात्र बायाँ माउस बटन प्रतिमा को उपस्थिति मा हुन सक्छ।
कृपया याद गर्नुहोस् कि अर्को अभिलेखमा "चौडाइ" पङ्क्ति र स्तम्भहरू रिसाइज लागि माथि वर्ण को उपस्थिति देखिन्छ वा सेल आकार को संख्यात्मक मान "उचाइ" भनेर। तपाईं प्रायः एक्सेल सम्पादकमा टेबल काम भने सजिलो तुरुन्तै संख्या मा आकार निर्दिष्ट गर्न, तर "आँखा द्वारा" पिक अप छैन।
कसरी तालिका सिर्जना गर्न , एक्सेल यदि केही "विन्डो" तालिका प्रत्येक अन्य जडान हुनुपर्छ? प्रत्येक अन्य संग कक्षहरू केही संयोजन गर्न, यो सामेल गर्न जो ती पहिचान गर्न र बटन प्रयोग आवश्यक छ "मर्ज र केन्द्र।" एक बहु कक्षहरू सट्टा स्क्रिन ठूलो देखिन्छ।
कसरी फरक रंग को एक एक्सेल स्प्रेडसिट सिर्जना गर्न? तपाईं कुनै पनि रंग मा कागजात तालिका चयन गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले हुनुपर्छ:
1 तालिका चयन गर्नुहोस्।
2. कल दायाँ माउस बटन सन्दर्भ मेनु।
3. चयन गर्नुहोस् "स्वरूप कक्षहरू।"
4 "दृश्य" ट्याबमा जानुहोस्।
5 इच्छित भरण रंग चयन गर्नुहोस्।
को "स्वरूप कक्षहरू" मेनुमा पनि निम्न कार्यहरु प्रदान गर्दछ:
• कक्षहरूको संख्या ढाँचा परिवर्तन;
• सेल सामग्रीहरू (अस्तर) को स्थिति परिवर्तन;
• पाठ सम्पादन गर्नुहोस् निर्देशन;
• अभिलेख अभिमुखीकरण परिवर्तन;
• शैली र फन्ट शैली, आफ्नो रङ र आकार को विकल्प;
• सेल / तालिका सीमाना मा परिवर्तन, साथै चयन गरिएको लाइनको प्रकार र रंग।
हामी अब Microsoft Office Excel को 2010-औं संस्करणमा बारी। कसरी एक्सेल 2010 मा तालिका सिर्जना गर्न? नयाँ संस्करण, यो ठीक नै अल्गोरिदम को माथि वर्णन रूपमा पनि धेरै सजिलो बनाएको छ। उपयोग को आसानी एक्सेल 2010 उपकरणपट्टीमा 2003 मा भन्दा धेरै राम्रो छ भन्ने छ। अघिल्लो संस्करणमा सन्दर्भ मेनु प्रयोग गरेर र अतिरिक्त Windows कल मात्र उपलब्ध थिए जो लगभग सबै आवश्यक र बारम्बार प्रयोग बटन, त्यहाँ सुनाए।
एक्सेल - टेबल को सजिलो सिर्जनाको लागि सबैभन्दा प्रयोगकर्ता-अनुकूल कार्यक्रम को एक! हामी आशा यो लेख पढ्ने र माथि सुझाव प्रयोग गरेर, तपाईँले यसलाई उदाहरण द्वारा देख्ने!
Svchost.exe netsvcs जहाज विन्डोज7मेमोरी कसरी समस्या समाधान गर्न?
तालिका पाठ र तालिका नै "वचन" कसरी खोल्न
AirPlay: छ, तपाईं को आवश्यकता र कसरी समावेश गर्न के?
दूध सूप तयारी गर्दै। छिटो र स्वादिष्ट।
Orthodontic उपकरण Frenkel: विवरण, फोटो
प्रजनन - यो के हो? अवधारणा लागि यो अनुपात महत्त्व
वयस्क मा herpes को उपचार। Shingles: वयस्क मा लक्षण र उपचार। को herpes भाइरस प्रकार6वयस्क: उपचार
होटल मा कोठा को प्रकार: स्वाद एक छुट्टी चयन
Endangered बिरुवाहरु। दुर्लभ र Endangered वनस्पति
"अन्ना केरेनिना": क्यारेक्टर र उनको भूमिका
Photoepilator "फिलिप्स Lyumia": समीक्षा। Photoepilator "फिलिप्स Lyumia सुविधा"
Stigma - यो के हो?